मैले जिते राजनीतिक रंग देखिन्न — samadhannews.com
मैले जिते राजनीतिक रंग देखिन्न
पाेखरा, २ आश्विन:
यसपालिको चुनाव पेचिलो बन्दै गएको छ । तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?
एउटा अर्थमा निर्वाचन पेचिलो बन्दै गएको छ । अर्को अर्थमा आम मतदाताको हौसलाले मेरो जित निश्चित बन्दै गएको छ । उहाँहरुले यसपालिको चुनाव तपाईंले जित्नुभएन भने संघको कसरी हित हुन्छ र भनेर हौसला दिइरहनुभएको छ । निर्वाचन जति पेचिलो बने पनि निर्वाचनपश्चात फेरि आफ्नै ठाउँमा बसेर संघले जेजति काम गथ्र्यो, ती कामलाई निरन्तरता दिन्छ । अब विकास, निर्माणका कामलाई कम गर्ने र व्यावसायिक समस्यालाई अलि बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
मतदातासँग के कारण बताउँदै मत माग्नुभएको छ ?
मैले मत माग्दा प्रस्ट कुरा राख्ने गरेको छु । व्यावसायिक र सामाजिक संघ, संस्थामा काम गर्दै आएको छु । विगतमा अटो मोबाइल डिलर्स एसोसियसनमा काम गरें । त्यो संस्थाको स्थापना कालदेखि नै काम गर्दै आएँ । त्यस्तै नेपाल अटो मोबाइल्स डिलर्स एसोसियसनको केन्द्रीय उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेर पनि काम गरिसकेको छु ।
लाइन्स क्लब अफ पोखरा सेन्टरमा २००४ र ५ मा संस्थापक सचिवकै भूमिकामा थिएँ । त्यसपछि क्रमशः उपाध्यक्ष, द्वितीय उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्षसम्म भएँ । त्यसपश्चात डिस्ट्रिक्टका विभिन्न पदमा रहेर आफूलाई अपग्रेड गर्दै लगें ।
उद्योग वाणिज्य संघमा अटो मोबाइल एसोसियसनमा रहँदा विभिन्न समयमा भएका कार्यक्रममा क्रियाशील थिए । संघमा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिइसकेपछि ३ कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य पदमा रहेर काम गरें । ३१ औं महाधिवेशनले मलाई महासचिव चुन्यो । म जुनसुकै पदमा रहे पनि मेरो कार्य कुशलता र अनुभवलाई उपयोग गर्न पनि भोट मलाई दिनुपर्छ भन्छु ।
समग्रमा तपाईका एजेन्डा त आए । अध्यक्ष भएँ भने यी काम गर्छु भन्ने चाहिं के के हुन् ?
मैले १४ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छु । मलाई जस्तोसुकै अवसर प्राप्त होस्, व्यवसायिक क्षेत्रमा पहरेदार भएर काम गर्नेछु । व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागी सम्पूर्ण व्यवसायीको अभिभावकका रुपमा काम गर्नेछु । सम्पूर्ण व्यवसायीले आत्मसम्मानपूर्वक सहज रुपले व्यवसाय गर्न पाउनु पर्छ । त्यसैका लागि म सधैं क्रियाशील रहनेछु । अचेल राज्यबाट व्यवसायीलाई कुनै अपराधी हो कि भन्ने तरिकाले हेर्ने गरेको पाइन्छ । त्यो वातावरण हटाउन पनि लाग्नेछु ।
अर्को मुख्य कुरा निजी क्षेत्र स्थापित हुन नसक्नुको कारण बैंकको ब्याजदर हो । व्यवसायीले आफ्नो घरखेत, जायजेथा सबै दाउमा राखेर व्यवसायमा लगानी गर्छ, उसको व्यापार राम्रोसँग चल्न नपाउँदै बैंकको ब्याजदर बढ्दै जान्छ । उसले आफूले गरेको प्लानिङ अनुसार काम गर्नै सक्दैन । ८ प्रतिशतमा ल्याएको ब्याजदर १ महिनामा १२ सम्म पुगेको थाहा पाएका छौं । ब्याजदरमा सहजताका लागि सरकारसँग लबिङ गर्छाैं ।
अर्को समस्या घरधनी र भाडामा बस्नेबीचमा बढेको दूरी हो । भाडामा बसेर लगानीकर्ताले लगानी गर्दा मैले कति समयसम्ममा लगानी फिर्ता गर्छु, कसरी व्यवसाय गर्न सक्छु भन्ने कुरामा निश्चिन्त हुन सक्दैन । घरधनीले अन्य ठाउँबाट बढी पैसा पाउने अवस्था देखेपछि कुनै न कुनै बहानामा व्यवसायीलाई लखेट्ने परिपाटी छ । यो विषयमा पनि स्थानीय सरकारसँग ऐन बनाएर अघि जान सहकार्य गर्नुपर्छ ।
आजभोलि पार्किङको समस्या व्यापक छ । यसको समाधानका लागि स्थानीय सरकारसँग कुरा राख्नेछौं ।
व्यवसायीका नेतालाई जब चुनाव आउँछ, तबमात्रै व्यावसायिक कुरा गर्ने गरेको आरोप आउँछ । अरु बेला व्यावसायिक नेतृत्व हुँदैन भन्ने आरोपमा कति सत्यता छ ?
व्यवसायीका नेतालाई यो आरोप लाग्छ नै, यो म स्वीकार्छु । तर, अघिल्लो कार्यकालमा हामीले नगरेको चाहिं होइन । यहाँ थुप्रै किसिमका व्यवसायी हुनुहुन्छ । ती व्यवसायीका थुप्रै किसिमका समस्या छन् । सबैको समस्या हामीलाई थाहा हुने कुरा पनि हुँदैन । व्यवसायीलाई हामीले के भनेका छौं भने तपाईंहरुका समस्या के हुन् उल्लेख गरेर पठाइदिनुस् । केही साथीका मात्रै समस्या उल्लेख गरिएका चिठी आए । समस्यामा घरभाडा, ब्याजदर, पार्किङ, व्यापारमा गरेको उधारो र त्यसलाई कसरी उठाउने भन्ने कुरा नै मुख्य थियो । उहाँहरुको गुनासो स्वाभाविक हो । उहाँहरु नै समस्या पनि लिएर नआउने अनि संस्थाले गरिदिएन भन्नु पनि भएन । तर, गुनासो आएन भन्दैमा अभिभावकका हिसाबले हामी चुप लागेर बस्नु पनि भएन नि ।
अहिले संघको चुनावमा राजनीतिक लडाईं भइरहेको छ भन्ने हल्ला छ । यस्तो भएकै हो ?
संघमा मैले ८ वर्ष काम गरें । प्रत्येक २ वर्षमा नयाँ कार्यसमिति छनोट हुन्छ । २२ महिनासम्म राजनीतिको कुरा आउँदैन । जब निर्वाचन नजिक आउँछ, राजनीतिक मुद्दाले प्रश्रय पाएको हामी पाउछौं । कुनै राजनीतिक दलमा आस्था राख्नु त्यो स्वभाभिक हो । तर, कार्यकर्ताको रुपमा काम गरेको छैन । राजनीतिक टिम बनाउने होइन, मिलाएर जाऊँ नभनेको होइन । यति हुँदाहुँदै पनि साथीहरु विस्तारै मलाई छोड्दै जानुभयो । मैले उपल्लो पद दिन्छु भनेका साथीहरु पार्टीकै कारण तल्लै पदमा पनि जान तयार हुनुभयो । यति भइसकेपछि मैले पनि आफ्नो किसिमले टिम बनाउनुपरेको हो ।
समावेशी टिम भनिएको छ । तर,पार्टीको चिह्न राखेर पनि प्रचारप्रसार भए । यसले त झन उद्योगी व्यवसायीलाई विभाजित गर्दैन र ?
यस्तो परिस्थिति आउनुको कारण उहाँहरुको टिम निर्माण नै हो । हामी हेर्न सक्छौं उहाँहरु पार्टीको झन्डामा स्थानीय चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि नै हुनुहुन्छ । मैले के भन्न चाहन्छु भने मैले जितें भने राजनीतिक रंग या प्रभाव देखिने छैन । कोही पाखा, कोही काखा हुने छैन । उद्योग वाणिज्य संघलाई व्यवसायीको पवित्र मन्दिर बनाउनेछु । म यो संकल्प गर्छु ।
पोखरामा दशौं हजार व्यवसायी छन् । त्यसमध्ये ३ हजार ३ सय मात्रै संघको सदस्य छन् । कसरी ठूलो संख्यामा उद्योगी, व्यवसायी संस्थाभन्दा बाहिर पर्न गए ?
पहिलो त संघको विधान नै हो । यो कारणले पनि कतिपय साथीहरु अटाउन सक्नु भएन होला । यदि कुनै साथीहरु नीति र विधानले सक्षम हुँदाहुँदै पनि अटाउन सक्नु भएको छैन भने त्यसका लागि पहल गर्ने छु ।
अध्यक्ष प्रत्यासी, उद्योग वाणिज्य संघ चुनाव
‘प्रदेश सरकारले बजेट दिन मानेन’: डा. अर्जुन आचार्य
कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको केपी ओलीकाे कारणले होइनः मुख्यमन्त्री गुरुङ (अन्तरवार्ता)
व्यवसायीकै चाहनाले मेरो उम्मेदवारीः रविन्सन प्रजु
‘हारेका साथीहरूसँग पनि छलफल गर्छु’ : सुरज श्रेष्ठ
‘सरकारले उठाएको राजस्व वितरणमुखी होइन उत्पदनमुखी हुनु पर्छ’
ठूलोपोखरीमा फेवातालको जस्तै डुंगा चलाइन्छ: राजेन्द्र पाैडेल